विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७ लाख ४० हजार, ३५ हजारभन्दा बढीको नि’धन, कुन देशमा कति ? – Life Nepali
विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७ लाख ४० हजार, ३५ हजारभन्दा बढीको नि’धन, कुन देशमा कति ?
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी प्रकोपका कारण सोमबारसम्म सात लाख ४० हजार व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । विभिन्न मुलुकबाट एएफपीलाई उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार सोमबार साँझसम्ममा ३५ हजार १५ जनाको सङ्क्रमणका कारण निधन भएको छ । सङ्क्रमणका कारण विश्वभर विगत २४ घण्टामा मात्रै एक हजार ४९ जनाको निधन भएको अमेरिकास्थित जोन हकिन्स विश्वविद्यालयले सोमबार जानकारी गराएको छ ।
पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अमेरिकामा अत्यधिक बढेको दखिएको छ । दुई हप्ता पहिले अमेरिकामा छिटफुटरूपमा सङ्क्रमण भेटिने गरेकोमा यो सङ्ख्या गत हप्ताको अन्त्यतिर अत्यधिक बढेको थियो । अमेरिकाले गत हप्ता अत्यधिक व्यक्तिको सङ्क्रमण परीक्षण भएका कारण सङ्ख्या अत्यधिक बढेको जनाएको छ । कोरोना भाइरसका कारण निधन हुनेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी इटलीमा देखिएको छ । इटलीमा अहिलेसम्म १० हजार ७७९ व्यक्तिको निधन भएको छ भने ९७ हजार ६८९ व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन् ।
स्पेनमा ८५ हजार १९५ व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने सात हजार ३४० जनाको निधन भएको छ । त्यस्तै चीनमा ८१ हजार ४७० सङ्क्रमित भएकोमा तीन हजार ३०४ व्यक्तिको निधन भएको छ । चीनमा पछिल्ला केही हप्तादेखि निधन दर एकल अङ्कमा रहने गरेकोे छ । चीनमा विगत २४ घण्टामा थप ३१ जना सङ्क्रमित भेटिएका र अधिकांश विदेशबाट चीन आएका व्यक्ति रहेका छन् भने यो अवधिमा चार जनाको निधन भएको छ । चीनले यसअघि नै छिटफुट घटनाबाहेक कोरोनासङ्क्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको बताएको छ ।
जर्मनीमा सङ्क्रमित ६३ हजार ७९पुष्टि भएको छ भने ५४५ जनाको निधन भएको छ । इरानमा ४१ हजार ४९५ सङ्क्रमण र दुई हजार ७५७ जनाको निधन भएको छ । फ्रान्समा ४० हजार १७४ व्यक्तिमा सङ्क्रमण, दुई हजार ६०६ जनाको निधन , बेलायतमा १९ हजार ५२२ व्यक्तिमा सङ्क्रमण, एक हजार २२८ जनाको निधन भएको छ । एशियाली मुलुकहरूमा चीन र इरानबाहेक दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या नौ हजार ६६१ रहेको छ।
भने १५८ जनाको निधन भएको छ । जापानमा १८६६ व्यक्तिमा सङ्क्रमण र ५४ जनाको निधन भएको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित पाकिस्तानमा एक हजार ५० सङ्क्रमित छन् भने २० जनाको निधन भएको छ । भारतमा एक हजार ७१ जना सङ्क्रमित छन् भने २९ जनाको निधन भएको छ । दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकमा भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून रहेको छ ।
Previous सीमामा करिब पाँच सय नेपाली अलपत्र, गौशालामा भोकभोकै रात काट्दै..
Next चिनियाँ नागरिक भन्छन् : सरकारले ढाँट्यो, कोरोनाबाट ४२ हजार बढी म’रेका हुन्’